प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवेदनमा कमजोरी नदेखिएपछि प्रचण्ड पक्षको आरोप : अन्य नेताहरुले लेखिदिए ! « Janata Times
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवेदनमा कमजोरी नदेखिएपछि प्रचण्ड पक्षको आरोप : अन्य नेताहरुले लेखिदिए !
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एंव अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३८ पृष्ठको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । कात्तिक २८ गते दोस्रो नम्बरका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको आरोपपत्रको जवाफ दिदै उहाले विगतका कमजोरी, वर्तमान अवस्थाको चित्रण र पार्टीलाई आगामी दिनमा कसरी विवादमुक्त बनाउने भनेर प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ ।
उहाले पार्टीलाई राम्रो र अझै प्रभावशाली बनाउन हरेक विकल्प दिदै यी सबै अवलम्वन गर्न तयार रहेको घोषणा समेत लिखित रुपमै गर्नुभएको छ । उहाको प्रतिवेदनलाई लिएर प्रचण्ड पक्षले भने शुरुवातीमा आक्रोश, दम्भ भरिएको भनेर प्रतिक्रिया दिएको छ । यद्यपी कुन विषयमा त्यस्तो देखियो भनेर खुलाएको छैन ।
प्रचण्ड पक्षिय नेताहरु भने प्रतिवेदनमा खराबी नदेखिएपछि अन्य नेताले लेखिदिएको भनेर बजारे हल्ला चलाउन थालेका छन् । ओली पक्षिय नेताहरुका अनुसार प्रतिवेदनमा छलफल र बहस गर्नुको साट्टो नेताहरु अन्यले लेखिदिएको भन्दै कुतर्क गर्न थालेका बताउछन् । ‘कुनै खोट नदेखिएपछि दाईको कपाल त फुलेछ नि, भनेर आलोचना गरे जस्तै भयो उहाहरुको प्रतिक्रिया’, एक नेताले भने ।
शनिवारको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा ओलीले पार्टीको नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण, बहुमत र अल्पमतबाट महाधिवेशनमा जाने र अन्य कुनै निर्णय गर्न तयार हुने हो जस्ता प्रस्ताव गर्नुभएको छ । युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा अन्य नेताहरु विगतदेखी मौन बस्दै आउनु भएको छ । पार्टीलाई विधि, पद्धतीमा लैजाने भनेपनि नेतृत्वमा मर्नु अगाडीसम्म मै हुनुपर्छ भन्ने बानी स्पष्ट देखिएको नेकपाकै नेताहरु बताउछन् ।